Iimpawu, indlela yokuphila kunye nokuzala kwakhona kwe-eel shark | Ngeentlanzi
Enye yookrebe eyaziwa ngokuba yenye yezona ntlobo zindala ezikhoyo emhlabeni yi ukrebe we-eel. Ekuhambeni kwexesha kuye kwabizwa ngokuba yifosili ephilayo. Kungenxa yokuba esi silwanyana besiphila kumaxesha angaphambi kwembali kwaye sisaphila nanamhlanje. Nangona kunjalo, nangona oku kunokuba yinto eqhelekileyo kwezinye iindidi, oku akubanga nakuphi na ukuvela ngalo lonke eli xesha.
Ke ngoko, siza kunikezela eli nqaku kwi-eel shark. Ukuba ufuna ukwazi ibhayoloji, indlela yokuphila, ukutya kunye nokuzala kwakho, yile post yakho
4 Ukondla nokuzala kwakhona kwe-eel shark
Ngokwesiqhelo, zonke iintlobo ziphantsi kohlengahlengiso lokusingqongileyo ekuhambeni kwexesha kwaye ziguquka. Iimeko zokusingqongileyo kunye nokunxibelelana nabanye abantu kwiindawo zokuhlala zendalo kunye neendawo eziphilayo azisoloko zifana. Ngesi sizathu, iintlobo zihlala zithambekele ekuphuhliseni kwimfuza yazo ezinye zeendlela ezizisebenzelayo ukuze ziphile ngcono kwezi meko kwaye yimpumelelo ngakumbi kokubini ukusinda nokuzala.
Nangona kunjalo, i-eel shark khange ikhe ilungiswe okokoko kwangaphambi kwembali. Isesisilwanyana esineempawu eziphantse zafana nezakuqala. Oku kubangela ukuba kubizwe ngokuba yifosili ephilayo njengoko iyintlobo yezilwanyana eneempawu zembali.. Nangona sisilwanyana esaziwa ngabantu phantse kwihlabathi liphela, akukho lwazi lungako lwaziwayo ngaso.
Kuyaziwa ngeendlela ezininzi ukuba luhlobo oludumileyo. Igama le-eel shark livela kwimilo efana nenyoka yamanzi. Ingesosapho lweChlamydoselachidae kwaye inamanye amagama aqhelekileyo anje ngeruff shark. Kule mihla, Singayibona kuluhlu lwezilwanyana eziphantse zasesichengeni nguManyano lwaMazwe ngaMazwe loLondolozo lweNdalo (IUCN). Isizathu sokuba baphantse basongelwa kukuba bazingelwa ngengozi enzonzobileni ngokuloba kunye nezinye iindlela zokuvuna.
Xa befika bevela ezinzulwini ukuya kumphezulu bafika sele befile, kuba abanakho ukumelana notshintsho ngequbuliso kuxinzelelo. Enye into abaphantse basongelwa ngayo kukuzala okucothayo abanako. Ukuba sidibanisa ukuba bafuna iminyaka emininzi yokuzala kunye nokonyusa inani labo babanjwe ngengozi, kuyinto eqhelekileyo ukuba inani labantu beentlobo lincinci kwaye lincinci.
Umzimba we-eel shark ubhityile kakhulu xa kuthelekiswa nabanye ookrebe. Ngumzimba ofana nalowo we-eel. Ngokwesiqhelo, banobude obuphakathi malunga neemitha ezi-2. Oku akuthethi ukuba bonke abantu bangobukhulu. Ezinye ziye zavavanywa kubude obuziimitha ezi-4.
Impumlo ikwisentloko esembindini wentloko enomilo ojikeleziweyo. Nangona ingacacanga ncam, iphatha malunga namazinyo angama-300 ewonke. Inazo zisasazwe kwimiqolo enqamlezileyo engama-25, Oko kuthetha ukuba akukho nalinye ixhoba elinokubalekela kule krebe.
Amandla anawo emhlathini kunye nemilo anayo iyanceda ukuginya ixhoba elikhulu ngaphandle kwengxaki. Umbala wokrebe umnyama mnyama. Inamaphiko emqolo, i-pelvic kunye neempiko zangaphezulu ukongeza kuvulo lwe-gill ezi-6.
Badada ngokukhawuleza. Esinye sezinto ezibangela umdla ezitsala ingqalelo yezi krebe kukuba, xa zidada ngesantya esiphezulu, zenza njalo zivule imilomo. Zizilwanyana ezingenakuphila ngaphandle kwendawo yazo yokuhlala okanye ekuthinjweni, nokuba zingakhathalelwa kangakanani.
Ezi zilwanyana zihlala kwiindawo ezinzulu kakhulu. Phakathi koku kunye nenyaniso yokuba abanakugcinwa ekuthinjweni, kuyinto eqhelekileyo ukuba akukho nto ingako yaziwayo malunga nale ntlobo. Awungekhe wenze izifundo kubo. Bahlala bahlala kubunzulu beemitha ezingama-600, ubuncinci beemitha ezili-150. Yeyona nto ikufutshane kubo ukubonwa ngaphezulu.
Olona hlobo kuphela lokuzizisa ngaphezulu kukuba bakukhangele ngamandla ukutya. Nangona kunjalo, bakwenza ebusuku, kuba abafuni kubonwa nangayiphi na indlela.
Indawo yokuhanjiswa kwayo ibanzi kodwa inesimo esingaqhelekanga. Singazifumana eAngola, eChile, eNew Zealand, eJapan, eSpain, nakwiilwandlekazi iAtlantic kunye nePasifiki.
Ukondla nokuzala kwakhona kwe-eel shark
Ukutya oku kule shark kwahluke kakhulu. Kuba umzimba wayo uyayivumela ukuba iginye lonke ixhoba, inokutya iintlobo ngeentlobo zezilwanyana. Ekutyeni kwayo ikakhulu kubandakanya squid, cephalopods, ezinye iintlanzi kunye nookrebe.
Uthathwa njengomzingeli onobuchule kwaye owoyikwayo. Ihlala izingela ebusuku ukunqanda ukubonwa kunye nokubamba ezinye iintlobo zingalindelanga. Ingabonakaliswa kakuhle ngombala wesikhumba sayo kwaye iyayisebenzisa njengento eyothusayo yokuhlasela ixhoba. Mhlawumbi le mpumelelo ekudleni kwayo kunye nezi mpawu ziyenza inganyanzelekanga ukuba iguquke ukuze ivumelane nemeko ezahlukeneyo. Enkosi ngombala wayo ifihliwe, idada ngesantya esiphezulu kwaye inemigca yamazinyo kunye nomhlathi ovumela ukuba iginye ixhoba liphela. Ngazo zonke ezi mpawu, ayifuni kuguquka, ngoko iseyindidi yakudala, kodwa namhlanje.
Ngokubhekisele ekuvelisweni kwayo, kungohlobo lwe-ovoviviparous. Ekuzalweni ngalunye kukho abantwana abaphakathi kwesi-5 ukuya kweli-12. Abancinci bafuna ixesha elide lokumitha. Bamele ukuba bakhula phakathi kweminyaka emi-2 nengu-3. Yile nto besikhe sathetha ngayo ngaphambili ngesinye sezizathu zokuba kutheni oluhlobo lusengozini. Phakathi kokubanjwa ngengozi, isidingo sokumitha iminyaka emi-2 ukuya kwemi-3 kwaye, kuyo yonke inzala, ayingabo bonke abathi babe ngabantu abadala, kuyinto eqhelekileyo ukuba abantu babe yingozi.
Nje ukuba abantwana bawushiye umzimba kanina, zihlala ziphakathi kwama-40 nama-60 cm ubude. Bangamaxhoba ezinye izilwanyana xa bengekakwazi ukuzikhusela.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi luyakunceda ukuba wazi ngakumbi nge-eel shark.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Ukrebe kaEel